Injini ye-Ajax ekwiNFD isha amashushu ngokunyuka
UMDLALI we-Ajax Cape Town uGrant Margeman uthi angajabula ukuthi iqembu elidlala kwi-Absa Premiership ngesizini ezayo Isithombe: BACKPAGEPIX
NDUDUZO DLADLA | June 11, 2019
ULOBIZELA ukudlala kwi-Absa Premiership ngesizini ezayo uGrant Margeman oyinjini ye-Ajax Cape Town neqembu lesizwe lika-Under 23.
Ngokusho kukaMargeman, iNational First Division (NFD) imenze wakhula ekubeni umdlali, futhi yaqinisa umzimba wakhe nomqondo.
Nokho uthe inkumbulo yePremiership iyambusa kakhulu muva nje. Amahlebezi athi izikhulu ze-Ajax sezibonile ukuthi zihluleke zancama ukukhuphukela kwiPremiership ngesizini edlule, yingakho sezizama ukuthenga isitifiketi kwamanye amaqembu ayibamba kwiPremiership.
“Ngingakujabulela ukudlala kwiPremiership ngesizini ezayo. Sengidlalile kwiNFD ngafunda okuningi. Kodwa kuyisifiso sami ukudlala kwiPremiership ngoba ukudlala kwiNFD kuyalehlisa izinga lomdlali lokubiza emakethe,” kusho uMargeman.
Ebuzwa ukuthi uma engashelwa elinye lamaqembu adlala kwiPremiership angasayina yini kulona uthe: “Alikho iqembu elingishelayo njengamanje kodwa ukudlala kwiPremiership ngingakujabulela ngoba iyona ligi enkulu kuleli. Isifiso sami ukuthi ngelinye ilanga ngidlalele elinye lamaqembu amakhulu kwiPSL,” kusho uMargeman.
Phakathi kwamaqembu okuthiwa izikhulu ze-Ajax zifuna ukuwathenga kubalwa iBloemfontein Celtic neChippa United.
Nokho womabili la maqembu ayakuchitha ukuthi ake axoxa ne-Ajax ngokudayiselana.
UMargeman uthe akanaso isiqinisekiso sokuthi uzobe edlala kuphi ngesizini ezayo.
“Angizazi ukuthi ngizobe ngidlala kuphi kodwa ngingakuqinisekisa ukuthi ngingumdlali we-Ajax Cape Town,” kusho lo mdlali.
UMargeman ushaye into ecokeme iBafana Bafana ihlabana inqoba iPlate Final kwiCosafa Cup ngeledlule.
“Ngicabanga ukuthi sihlangene manje, iZimbabwe sizokwazi ukubhekana nayo futhi senze kahle ngoba inhloso ukuthi sihlungele ngempumelelo imiqhudelwano efana ne-Afcon ka-Under 23 nama-Olympic. Ukudlala kwiCosafa Cup kusisize kakhulu,” kusho uMargeman.